दाँया आँखा फरफराउँदैछ ? यस्ताे छ संकेत… – ramechhapkhabar.com
दाँया आँखा फरफराउँदैछ ? यस्ताे छ संकेत…
मानिसको शरीरका विभिन्न अंगहरु कहिले काहीँ फरफराइ रहेको हुन्छ । सामुद्रिक शास्त्रका अनुसार शरीरको विभिन्न अंगहरु फरफराउनुले भविष्यमा हुने घटनाबारे जानकारी दिन्छ । सामुद्रिक शास्त्र वैदिक शास्त्रको एक हागा हो । जसले मानिसको अनहार, तेज, एवम् शरीरको पूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दछ ।
सामुदि्रक शास्त्रका अनुसार शरीरका अंगहरु फरफराएमा कतिपय अवस्थामा शुभ हुन्छ र कतिपय अवस्थामा अशुभ हुन्छ । थाहा पाउनुहोस कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ।
सामुद्रिक शास्त्रका अनुसार कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ :
-दाँया आँखा फरफरायो भने आफ्नो इच्छा पूरा हुन्छ । -बायाँ आँखा फरफराउँनु राम्रो खबर सुन्न पाउने संकेत हो । -चिउँडो फरफराउँदा व्यकि्तलाई स्त्री सुख मिल्नुका साथै धनलाभ पनि हुन्छ । -दुबै गाला फरफराउँदा धन प्राप्त हुन्छ ।
-लगातार दाहिने परेला फरफराएमा शारीरिक कष्ट हुन सक्दछ । -घाटी फरफराउँदा शुभ हुनुका साथै मान—सम्मानमा वृदि्ध हुनेछ । -टाउको फरफराउँदा सुख सुविधा तथा सफलता मिल्छ । -निधार फरफराउँदा भौतिक सुख भोगको अवसर प्राप्त हुन्छ । -ओठ फरफराउँदा मिल्ने साथीको आगमन हुन्छ ।
-दाहिने खुट्टा फरफराएमा कठिनाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बाँया खुट्टा फरफराउँदा कतै यात्रा गर्ने सम्भावना रहन्छ । -हात फरफराउँदा मानिस कुनै विपत्तमा फस्न सक्छ । -निधार फरफरायो भने सन्तान लाभ मिल्छ । -बाँया तिघ्रा फरफरायो भने अपमानित हुन सक्छ । -छाती फरफराउँदा साथीसँग भेट हुन्छ । -ढाँड फरफराएमा केहि विपदको सम्भावना रहन्छ ।